Kooxda Bayern Munich oo isha ku heysa Zinedine Zidane si ay kaga dhigato badalka Niko Kovac – Gool FM
Kooxda Bayern Munich oo isha ku heysa Zinedine Zidane si ay kaga dhigato badalka Niko Kovac
(Bayern) 15 Nof 2018. Kooxda Bayern Munich ayaa dooneysa inay shaqaaleysiiso tababare cusub si ay u bedesho macalinka reer Croatia ee Niko Kovač, kaasoo la dhibtoonayay Bavarian-ka tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkan.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in maamulka sare ee kooxda Bayern Munich ay isha ku hayaan macalinka reer France ee Zinedine Zidane, si uu u noqdo badan Niko Kovač.
Waxaa jira shaki badan ee ku aada mustaqbalka macalinka reer Croatia Niko Kovač ee Bayern Munich, xili ay kooxda kaga jirto dhanka kala sareynta horyaalka Bundusliga booska kaalinta 5-aad.
Dhinaca kale Bayern Munich ayaa kulankooda ugu dambeeyay horyaalka Bundusliga waxay guuldaro kala kulmeen kooxda Borussia Dortmund.
Si kastaba Zinedine Zidane ayaa ka tagay Real Madrid dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore, isagoo kooxda ku hogaamiyay Champions League seddex xilli ciyaareed ee xiriir ah.
Manchester United ayaa sidoo kale dooneysay Zidane bilowgii xilli ciyaareedkan, iyadoo shaki la galinayay mustaqbalka Jose Mourinho, waxaana wali ilaa iyo haatan lala xiriirinayaa inuu ka dhaqaaqi doono shaqada kooxda Red Devils mustaqbalka dhow.
Xiliga uu dib ugu soo laaban doono De Bruyne tababarka kooxda Manchester City oo lasii ogaaday
“Guuldarada Croatia waa mid xanuun badan, mana ahayn midaan u qalanay” - Luis Enrique